"Wet palette" - rubatsiro ne acrylic kupenda • Modelarski Świat
"Wet palette" - rubatsiro rwekupenda nemaacrylics
Model nyika DIY: DIY Muenzaniso Kugadzira Modelling guides 2018-04-25 | 3
Kupenda nebrashi ine acrylic pendi, kureva yakajairwa pendi yevaenzanisi, inomutsa rimwe dambudziko - isu tinoda kudurura madonhwe mashoma kumwe kupenda chimwe chinhu, asi pendi yakadirwa pachivharo inomesa nekukasira, inokora uye tinofanirwa kuishandisa zvakare mushure menguva pfupi. Dambudziko rakanyanya kukosha kana isu tasanganisa ruvara uye isu tinofanirwa kuisa maviri kana matatu marara uye izvi zvinoda kuzorora mukupenda. Nzira yekudzivirira pendi kubva pakuomesa panguva yebasa?
Chii chinonzi "wet palette"?
Iyo inzira inozivikanwa muhunyanzvi hwekupenda uye modelling yekuchengetedza humidity yeacrylic acrylic mvura-yakavakirwa pendi. Chinyorwa chinoiswa panzvimbo yakanyorova, iyo kune rumwe rutivi inodzivirira pendi yakadururirwa pairi kubva pasi, uye kune rumwe rutivi inobvumira mvura kuti ipe kubva pasi uye "inyorovese" pendi yakadururwa.
Iyo patent iri nyore kwazvo yechikamu chependi icho chatinoshandisa kudururirwa kupenda kuti chigare chiri chitsva uye chakanyorova kwenguva yakareba. Kusvika papi? Iwe unogona kupedzisa kupenda zvakachengeteka uye uchisiya iyo yakasara yependi kunyangwe kwemazuva mashoma uye icharamba ichinyungudutswa uye yakakodzera kupfuurira kupenda! Kana iwe ukapenda chete nemabhurashi, ini ndinokuvimbisa kuti kana iwe usingazive iyi patent, mushure mekuyedza iyo, iwe uchagara neinonyorova palette zvachose. Iyo paletti nyoro inobatsirawo kuchengetedza pendi - isu tinopambadza zvishoma, kunyanya kana kupenda muzvikamu.
Zviri nyore kwazvo kugadzira
Isu tinogadzira paletti nyoro - chii chinodiwa?
mudziyo une pasi yakati sandara - mabhokisi emangwanani akanaka, kubva pahurombo kusvika kune zvidiki zvidiki zvinogona kunge chiri chivharo chehari
jira kana maviri epepa tauro / pepa chimbuzi
bepa (rakajeka grey bepa, e.k. Jan Zvakakodzera kana zvakafanana)
kota yegirazi remvura
Nechinangwa ichi, ndakatenga bhokisi rezvikafu rine chisimbiso, rakavharika chivharo, icho chinowedzera kunonoka kuoma. Iwo madonhwe ependi anogona kugara mairi kweinopfuura vhiki.
Bvarura bepa repepa uye woripeta kuitira kuti rikwane zvakasununguka muchimiro chebhokisi:
2. Dururira mvura pamusoro payo kuitira kuti igute zvakakwana. Dururira chero chakawandisa musingi. Bepa harina kuitirwa "kuyangarara", rinofanirwa kuzadzwa.
3. Cheka chimedu chakakodzera chebheka. Zviise ne matte pamusoro kune bepa uye wobva wadzvanya pasi zvishoma kuti iite. Paleti yako yemvura yakagadzirira! Iwe unogona ikozvino kuisa madonhwe ependi uye kutanga kupenda. Iwe unogona kudurura mavara akasiyana uye wosanganisa iwo pamwe chete pasina kunetseka nezve kudzokororazve iro rakasanganiswa ruvara gare gare. Ingoita zvakawanda, hazviome.
Mapepa ekubheka ane imwechete yakaturikidzana, kazhinji yakachengetedzwa nesilicone - zvisinei, iyo matt pamusoro inobvumidza kupindirwa kwemadiki macroscopic emvura - nekudaro iyo nzvimbo yatinodonhedza maacrylics inogara yakanyorova. Rangarira kuronga pepa racho zvakanaka mubhokisi. Iwe unogona kuinzwa pasi peminwe yako, iyo matte divi iri shoma inotsvedza pakubata.
Ndinga sanganisa sei acrylic pendi nebhurashi?
Ehezve, iwe unogona kudzora pendi nemvura kana zvimwe zvakasarudzika sezvazvinodiwa. Iwe unogona kutarisa nyore kuenderana kwayo - bhurasho rwizi rwependi nebhurashi - kana rwakatambanukira mune yakajairwa, asi isina kunyanyisa kukora, zvakanaka, kana ikaputikira mumadonhwe, yakanyanyiswa. Kunze kwekunge iwe uchida kuwana kujekesa kupfeka, izvo zvinonzi "Glaze", ipapo ndizvo zvinodiwa.
! Izvo zvakakodzera kushandisa ... zvipikiri zvako kutarisa iko kuenderana kwependi! Penda chidimbu chembambo nebhurasho uye uone kuti pendi inoita sei. mhedzisiro yacho ichave yakafanana chaizvo nemaitiro azvinoita pane iyo modhi. Minwe yakasviba inogona kushambidzwa nemvura kana chipikiri chekubvisa.
yevakatanga zvemberi acrylic pendi kupenda kupenda brush
Pashure: Previous romukova: Maitiro ekugadzira upholstery pane modhi - Sponge upholstery michina - yakapusa uye inoshanda!
Zvadaro: Chinotevera chinotevera: Kugadzira base yedhaorama - zvekuita nazvo? 1 yakapusa patent.
Nastiturius Iye anonyora, kuti:
Tamiya akatamba zvisina kunaka pane yakanyorova palette - ini ndaive nemafungiro ekuti yaive yakashatisa uye yakavanda zvisina kunaka. NaVallejo neCitadels, iri raive risiri dambudziko. Zvakadaro, pamwe pane zvandatadza.
mhoro Iye anonyora, kuti:
Kutonhora! Ndiri kumhanyira kuchitoro ipapo ipapo kuti nditore mudziyo wekudya une chisimbiso cherabha. Pakanga paine, zvisinei, kumwe kusahadzika. Ko maacrylics akasvinudzwa nedoro anozvibata sei pasuru nyoro? Pendi dzangu dzinonyanya mr hobby (h dzakateerana) uye tamiya (x uye xf), kunge maacrylics asi asiri echinyakare.
Kero yako ye-e-mail haizozoburitswa. Minda inodikanwa inoiswa mucherechedzo *
Iyo webhusaiti inoshandisa Akismet kudzikisa spam. Tsvaga zvimwe nezve maitiro ekutaurisa data.
Miss Modellers Nyika!